November | 2016 | Indrenionline.com | Page 5
Monthly Archives: १५ मंसिर २०७३, बुधबार ०२:१३
बसपार्कलाई पुर्णता दिन माग
तुलसीपुर १५ मंसिर । तुलसीपुर बसपार्कलाई आधुनिक बनाउने कार्यलाई पुर्णता दिन बसपार्क बासीले माग गरेका छन् । बसपार्क आधुनिक नबन्दा धुलाम्मे हुने गरेको र त्यस्ले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पारेको बसपार्कबासीहरुले बताएका छन् । बसपार्कलाई आधुनिक बनाउन तीन पटक सम्मको टेण्डर बदर भएको र यसमा नगरपालिकाले कुनै पहल नथालेको उनीहरुको गुनासो छ । तुलसीपुर बसपार्क धुलाम्मे हुँदा अहिले त्यहा रहेका ११ ...
नौ महिना देखि विमान सेवा ठप्प
भरतराज शर्मा / तुललसीपुर १५ मंसिर । लामो वन्दका वावजुद तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको प्रयासमा सञ्चालनमा आएको तुलसीपुरको हवाई सेवा विगत नौं महिना देखि ठप्प छ । हवाई सेवा वन्द हुँदा जटिल प्रकृतिका विरामिहरु र अतिआवश्यक कामका लागि छिटो यात्रा गर्न चाहानेहरु मर्काका परेका छन् । विशिष्ट व्यक्तिहरु देखि सरकारका मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु समेत दाङ आउन आनाकानी गर्ने गरेका ...
पहाडी जिल्लाहरु नहटाउन मागसहित ज्ञापनपत्र
घोराही १५ मंसिर । दाङ प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिले पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला हटाउन नहुने बताएको छ । सिमांकन हेरफेरको वहानामा प्रदेश नं. ५ लाई मात्रै चलाउनु र पहाडी जिल्लाहरु क्टौटि गर्न खोज्नु गलत भएको समितिको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । पाँच नम्बरलाई टुक्राउने पहल बन्द गर, रुकुम र सल्यानलाई समेत पाँच नम्बर प्रदेशमा कायम गर भन्दै सरोकार समितिले घोराही ...
विद्युत पोल हटाउन सुरु
तुलसीपुर १५ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुरले मंगलावरदेखि सडक विचमा गाडिका पोलहरु हटाउन सुरु गरेको छ । सडक विस्तामा सघाउ पुगोस भनेर पोल हटाउन थालिएको हो । तुलसीपुरको बरुवा गाँउले कुलोदेखि पूर्वमा हात्तिखौवाको सम्म छ लेनको सडक निर्माण गर्दा सडक विचमा पर्ने पोलहरु हटाउन सुरु गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख टंकराज गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा रहेका ४५ ...
तुलसीपुर १४ मंसिर । ब्राउन सुगर सहित दाङमा दुई जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको बिशेष प्रहरी टोलीले लागु औषधको कारोवार भईरहेको छ, भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा लक्ष्मीपुर गाबिस २ बबई खोलामा कटेज संचालन गरी बस्ने २७ बर्षिय भुवन जिसीलाई ८ सय ६ मिलीग्राम लागु औषध सहित नियन्त्रणमा लिएको हो । जिसीलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ...
राजेश हमाल जोडी ‘जात्रा २’ को प्रतिक्षामा
काठमाडौं, १४ मंसिर । नायक राजेश हमालले ‘जात्रा २’ को प्रतिक्षामा रहेको बताएका छन् । तेश्रो सातामा प्रर्दशनरत चलचित्र ‘जात्रा’ हेरेपछि जात्रा २ को प्रतिक्षामा रहेको बताएका हुन् । जीवनसाथी मधु भट्टराईसँग ‘जात्रा’ हेर्न कुमारी हल पुगेका हमालले कथाले अन्तिमसम्म नै बाँधेर राखेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “निकै मज्जाले हँसायो, दर्शकहरुले निकै मनोरञ्जन लिएको पाएँ,” उनले भने । आफ्नो साथीले ...
भारतीय सेनाको शिविरमा आक्रमण, दुई सेना घाइते
एजेन्सी, १४ मंसिर । भारतको प्रशासित क्षेत्र जम्मु स्थित नगरोटामा सेनाको शिविरमा आक्रमण भएको छ । बिद्रोहीले मंगलबार शिविरमा आक्रमण गरेका हुन् । त्यसपछि भारतीय सेनाले पनि जवाफी कारवाही गरेको बिबिसीले जनाएको छ । यस्तै साँबा सेक्टरको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा पनि बिद्रोही र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बिएसएफ) बिच गोली हानाहान भएको बताइएको छ । बिद्रोही र सुरक्षाकर्मी अहिले पनि भिडन्त ...
आमा बलात्कार गरेको आरोपमा छोरा पक्राउ
गोरखा, १४ मंसिर । गोरखामा प्रहरीले आफ्नै आमालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । ४६ वर्षकी आमालाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा गोरखा नगरपालिका–११ का युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । २६ वर्षका ति युवकले सोमबार बेलुका आफ्नै घरमा आमालाई बलात्कार गरेको प्रहरी नायव उपरिक्षक विरेन्द्र थापाले बताए । युवकलाई प्रहरीले प्रक्राउ गरि आज मुद्दा दर्ता गरेको छ ...
सीमांकनको विरोधमा दैलेखमा बन्द
दैलेख, १४ मंसिर । दैलेखमा ११ वटा स्थानीय तह रहने गरी भएको सीमांकन प्रस्तावमा असहमत पक्षले मंगलबारदेखि अनिश्चितकालिन दैलेख बन्द गरेका छन् । इलाका नम्बर ७ का तीन गाविस मालिका, गौरी र कालभैरववासीले गमौडीलाई समेत गाभेर ज्वालामालिका गाउँपालिका बनाउनु पर्ने माग गर्दै गरेका बन्दका कारण बिहानैदेखि दैलेख–सुर्खेत आवागमन गर्ने गाडी चल्न सकेका छैनन् । मंसिर ८ गते स्थानीय प्रशासन र ...
डा. गोविन्द केसी आन्दोलनलाई विप्लवको समर्थन
काठमाडौं, १४ मंसिर । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक पटक अनसन बसेका डा. गोबिन्द केसीलाई विप्लव माओवादीले पनि समर्थन गर्ने भएको छ । अनसन बसेको १७ दिन हुँदा पनि केसीका मागका बारेमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै विप्लव माओवादी सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीले आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेको छ । केसीको पदचाप पछ्याउँदै अखिल क्रान्तिकारीले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा ...